စင်္ကာပူအစိုးရက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်သော မျက်နှာဖုံး များထပ်မံဝေငှ။ လက်အသုံးပြု၍ အကြိမ် ၃၀ လျော်ဖွတ် အသုံးပြနိုင် – H2Oupdatenews
စင်္ကာပူအစိုးရက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်သော မျက်နှာဖုံး များထပ်မံဝေငှ။ လက်အသုံးပြု၍ အကြိမ် ၃၀ လျော်ဖွတ် အသုံးပြနိုင်
စင်္ကာပူအစိုးရက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော မျက်နှာဖုံးများ ကို ယနေ့ ထပ်မံဝေငှကြောင်း စင်္ကာပူရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများက ယနေ့ပြောဆိုသည်။
စင်္ကာပူတွင် နေထိုင်နေသူတိုင်းအား ယခုကဲ့သို့ မျက်နှာဖုံးများ အခမဲ့ဝေငှခြင်းမှာ တတိယအကြိမ် ဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ်၌ Surgical Mask ခွဲစိတ်ခန်းသုံး မျက်နှာဖုံးများ၊ ဒုတိယနှင့် တတိယအကြိမ်တို့၌ Reusable Mask “ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော မျက်နှာဖုံးများ” ဖြစ်ကြသည်။
ယခု တတိယအကြိမ်မြောက်ပေးဝေသော Ultra Masks များမှာ တစ်ခုလျှင် စင်္ကာပူ 10 ဒေါ်လာ တန်ကြေးရှိ၍ #လက်အားဖြင့် #အကြိမ်-၃၀ ပြန်လည်လျှော်ဖွတ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Ultra Mask ကို စင်္ကာပူ နန့်ယန်းနည်းပညာတက္ကသိုလ် NTU Food Science and Technology Lab တွင် ဘက်တီးရီးယားရောဂါပိုးမွှားကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီး အင်ဒိုနီးရှား၌ ထုတ် လုပ် ထားခြင်းဖြစ်သည်။ နေ့စဉ် အဆက်မပြတ် အသုံးပြုလျှင်ပင် တစ်လခန့် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ( Anti-bacterial innovation from Nanyang Technological University Food Science and Technology Lab. )
UltraMask တွင် အလွှာ ၃-လွှာ3layers ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး အပြင်ဘက်ဆုံး အလွှာနှင့် အလယ်အလွှာတို့မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းကို တားဆီးကာကွယ်နိုင်သော anti-bacterial filter 1 နှင့် anti-bacterial filter2အလွှာများ များဖြစ်ကြသည်။ ဘက်တီးရီးယားတားဆီးကာကွယ်ရေး အော်ဂဲနစ်ချည်ဖြင့် ယက်လုပ် ထားသည့်အတွက် ရောဂါပိုးမွှားများကို သတ်ဖြတ်တားဆီးခြင်း၊ ရှင်သန်ပေါက်ပွားခြင်းမပြုနိုင်သည့် အလွှာများ ဖြစ်ကြသည်။ The anti-bacterial organic cotton kills bacteria and supresses bacterial growth. No skin irritation.
အတွင်းဘက်ဆုံး အလွှာမှာ အာငွေ့နှင့်အစိုဓာတ်များကို လျှင်မြန်စွာ ခြောက်သွေ့ပြီး၊ ဝတ်ဆင်သူအား သက် တောင့်သက်သာရှိစေမည့် quick dry & cooling layer ဖြစ်သည်။
စင်္ကာပူနေထိုင်သူအားလုံးတို့အတွက် နေရာအနှံ့ Vending Machine အလုံးပေါင်း ၄၀၀ ကို ဖြန့်ကျက်ထား ကြောင်း၊ မေ-၂၆ မှ ဇွန် ၁၄-ရက်နေ့အတောအတွင်း IC ကဒ် အသုံးပြု၍ ၂၄-နာရီပတ်လုံး အခမဲ့ ထုတ်ယူ နိုင်ကြောင်း၊ မိမိ၏ IC ကဒ်ကို Vending Machine က စကင်ဖတ်မည်ဖြစ်ပြီး လူကြီး- ကလေး Size အရွယ် ခွဲခြားလျှက် ၁-ခုကျစီ အလိုလျှောက် အခမဲ့ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း၊ အချိုရည်- မုန့် ဝယ်ယူရသည်ထက် ပိုမိုလွယ် ကူကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါ Mask အကြောင်းအရာ အပြည့်အစုံအား www.ultramasks.com တွင် အသေးစိတ် ဖော်ပြထားသည်။
Previous Previous post: အမေရိကန်၌ လူသေအလောင်းများမှ ဟမ်ဘာဂါပြုလုပ်နေကြောင်း ပြောဆိုချက်များကို လူမှုကွန်ရက်မှ တရုတ်ဖျက်ချနေဟု ဆို။
Next Next post: ကျွန်တော် မိုက်ရိုင်းပြီး သွေး နားထင်ရောက်သတဲ့လား